PSJTV | यी हुन् रिमा विश्वकर्मा फिटनेसका ७ सूत्र
पछिल्लो समय कमेडी च्याम्पियनकी प्रस्तोताका रूपमा चिनिएकी छिन् सञ्चारकर्मी, मोडेल तथा अभिनेत्री- रिमा विश्वकर्मा।
उनी शारीरिक रूपमा पनि फिट सेलेब्रिटी मानिन्छिन्। उनको फिटनेसको राज उनकै शब्दमा आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ:
बिहान उठेर करिब दुई घन्टा जिम गर्छु। पहिले जुम्बा नृत्य गर्थेँ। त्यसलाई छाडेर जिम गर्न थालेँ। जिमले शरीरलाई फिट राख्न निकै सहयोग गर्छ।
२. फलफूल र तरकारी धेरै खान्छु
घरमै पकाएको खानेकुरा बढी खान्छु। चिल्लो बढी भएको र सोडा हालेको खाना खान्नँ। त्यसको साटो फलफूल, अन्डा र तरकारी बढी खान्छु।
३. पानी धेरै पिउँछु
पानीले शरीरमा ऊर्जा दिन्छ । प्रसस्त पानी पिउँदा रोग लाग्नबाट पनि बच्न सकिन्छ। म पनि पानी धेरै पिउँछु।
४. साँझ रोटी खान्छु
साँझ सधैँ रोटी, तरकारी र फलफूल खान्छु । बिहान मात्र भात खान्छु।
५. सकारात्मक सोच्छु
हरेक कुरालाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्छु । दुःख र सुख जिन्दगीका दुई पाटा हुन् । यही कुरा हाम्रो दिमागलाई बुझाउनुपर्छ । मनमा उथलपुथल आउन नदिई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ।
६. प्रेसर महसुस गर्दिनँ
हरेक कुरालाई सहजै लिन्छु । दुःखकै पलमा पनि राम्रो पक्षलाई केलाउने गर्छु। कामलाई कहिल्यै प्रेसरका रूपमा हेर्दिनँ । बरु काममा रमाउँछु।
७. कस्मेटिक कम प्रयोग
कस्मेटिक चिजमा विश्वास गर्दिनँ । सुटिङका वेला हेभी मेकअप गर्नुपर्छ । त्यसैले हरेक १५ दिनमा फेस क्लिनिङ गराउँछु। आफैँ पनि दिनहुँ फेस सफा गर्छु। क्रिम प्रयोग गर्दा अनुहारलाई फाइदा पुर्‍याउने प्रकारको मात्र छनोट गर्छु । खासगरी, प्राकृतिक उत्पादनका क्रिममा रुचि बढी छ।